Ezona ndawo ziHlangayo ze-Erogenous ngokusekwe kuPhawu lwakho lweZodiac - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kuthetha lukhulu malunga nokuziphatha kwakho ngokwesini. Uphawu lwakho lwe-zodiac lude lutyhile ukuba imimandla yakho ye-erogenous ikuphi kunye nezona ndawo zonwabisayo zomzimba wakho.
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kuthetha lukhulu malunga nawe ngokwabelana ngesondo, kubandakanya indawo okhoyo kuyo kunye nokuba ngawaphi amalungu omzimba wakho awona amkelekileyo kulonwabo kunye nokuchukumisa. Zithini iimpawu zomqondiso weenkwenkwezi? Ukwazi ukuba ungamkholisa njani iqabane lakho ebhedini kuxhomekeke ekwazini apho kufuneka ugxile khona kwaye kwinqanaba lokuqina. Wonke umntu wahlukile kwaye ufuna into ekhethekileyo ukuba ivulwe, fumana ukuba wena kunye nesithandwa sakho nifuna ntoni.
Isimboli ngasinye se-zodiac sidinga into eyahlukileyo ukuyenza i-orgasm. Isini esikhulu malunga nokuqonda umzimba kunye nokwazi ukuba yintoni eqhuba umntu ngamnye asendle kwigumbi lokulala. Ukwanga ngokwasenyameni kunokubangela abanye bethu ukuba bahambe, ngelixa ukubhucungwa kwezitabane kubonakala kusebenza kakhulu kwabanye. Fumanisa ukuba yeyiphi imiqondiso ye-zodiac ehambelana ngokufanelekileyo ngokwesondo. Ngawaphi amalungu omzimba afuna ukukhuthazwa ngaphambi kweseshoni yasendle?
Imimandla yophawu lwakho lwe-zodiac ityhilekile
Kuba uphawu ngalunye lulawula ilungu lomzimba wethu, kuya kufuneka ufumane ezona ndawo zibuthathaka. Kulungile, ezo zonyusa uyolo lokuchukumisa kunye nobunewunewu beemvakalelo zakho. Ewe iindawo ezithile zemizimba yethu zibuthathaka kwaye ziyathandeka kunezinye. Ngoku, ukwenzela ukuthintela naziphi na iimpazamo kwigumbi lokulala, sityhila ezona zishushu uyolo indawo ezifuna ukuphononongwa kwangoko!
-Fumanisa udidi lwe zeziphi iimpawu zodiacac zezona zibalaseleyo ebhedini ! -
Cofa kwiimpawu zehoroscope ezingezantsi.
Fumanisa ikamva lakho kuthando kunye nobudlelwane ngoncedo lwePsychic!
taurus ukuhambelana nomhlaza
Intloko kunye ne-scalp zivuyisa iiAries
Uphawu lweeAries imimandla erogenous zibotshelelwe kwi isikhumba sasentloko, intloko nobuso. Ukutshisa izinto ngobunono, qala ngokunika iAries umyalezo wesikhumba. I-massage yentloko inegunya lokuphumla abantu abahlala bengahoyi, ke sebenzisa isandla sakho kamnandi ngeenwele ze-Aries kwaye wenze isangqa. Oku kunokubonakala kukumangalisa kuwe, kodwa le yindlela efanelekileyo yokuvusa iingqondo ze-Aries, ke qhubeka kwaye ufumane isindululo esifanelekileyo kunye nendawo yomlingo.
Konke malunga nentamo yeTaurus
ITaurus ' Imimandla yolonwabo zidityaniswa intamo. Ukwenza i-Taurus inyibilike, ncamisa i-nape yentamo yabo, umphambili wentamo yabo, kunye namagxa abo ngobunono, ilandelwe yimassage ethambileyo. Ukuba ufuna ukuphatha iqabane lakho ngakumbi, sebeza kamnandi akukho nto indlebe zabo… oku kuyakwenza iTaurus iphambane!
Gxila esifubeni nasemabeleni eGemini
IGemini Iindawo zemilingo zezi isifuba, isifuba, namabele. Ezi ndawo zinobuntununtunu obukhulu kubahlobo bethu baseGemini: ukwanga, ukubamba, okanye nokuthamba kancinci kuya kuvusa uthando lukaGemini. Ungalibali ukuba iGemini ikwayingqondo, ke sebeza amagama amabi ezindlebeni zabo… iGemini yakho iya kuyithanda.
Imilebe iya kuqhuba umhlaza wasendle
Umhlaza 's indawo erogenous yi umlomo. Thatha uMhlaza uye ezulwini lesi-7, qala ngokubaphatha kamnandi emlonyeni. Unganqikazi ukudlala ngomlomo wakho ngokukhotha imilebe yakho. Jonga kakhulu umhlaza wakho kwaye ungazibambi…
Isisu siyakwenza iqhinga kuLeo
Indawo kaLeo yile isisu , ke lo mqondiso uyayithanda i-caresses kunye ne-kisses kule ndawo. Ukuvuselela umnqweno kwi-Leo, chukumisa isisu sabo kancinci kwaye ulandele ngokwanga. Ungaze ulibale ukuba uLeo kufuneka anqweneleke kwaye anconywe kakhulu, ke akukho nto iya kukonwabisa uLeo kunokubona ubarhalela.
Isisu siya kuseta iVirgo
Uphawu lweVirgo ludityaniswe ne amazantsi esisu, ukuze uqale ngokuncamisa indawo yenkaba, uhambe kancinci uye emazantsi esisu emva koko. Ukwenza iVirgo inyani, ubuntununtunu kunye nemvakalelo zibalulekile!
Yonke indawo yindawo yolonwabo yeLibra
Uphawu lukaLibra luphawu lwenkanuko yokuqala, ngenxa yoko iLibra idinga uthando kunye nokunxibelelana ngokwasemzimbeni. ILibra wonke umzimba uyingozi, Ukuchukumisa kunye nokucofa kuya kwenza iLibra keel ngaphezulu komzuzwana.
I-butt iya kuyivusa iScorpio phezulu
Indawo yolonwabo yeScorpio ibotshelelwe iimpundu. Ukujonga okulula kwi-butt entle kunokwanela ekuvuseleleni iScorpio. Ukuba ufuna ukulukuhla indoda yeScorpio, cinga ngokwenza i-strip-tease kunye nokunxiba iimpahla zangaphantsi ezilahlekisayo, ngokukhethekileyo kwimibala eqaqambileyo. Abafazi beScorpio bathanda xa umntu echukumisa kwaye ephulula iibham zabo.
Imilenze kunye neenyawo ziya kuba ne-Sagittarius
Indawo yomqondiso weSagittarius inxulunyaniswa nayo imilenze neenyawo. I-massage okanye ezinye i-caresses ziya kuvusa ngobumnene imvakalelo yeSagittarius. Ndikunye nendoda eyi-Sagittarius, ukubona imilenze entle kwizithende ezomeleleyo kuya kuthabatha ingqalelo yakhe…
Umva uyakuvuselela iCapricorn
Uphawu lweCapricorn lweendawo ezinobungozi zinxulunyaniswa umva. Ukuvusa izivamvo zeCapricorn, akukho nto ingcono kunokuthanjiswa komzimba! Nciphisa izibane, khetha ioyile okanye isiqholo esimnandi, kwaye udlale umculo ohamba nomoya ongasemva. Oku kuya kuba yinto yangokuhlwa enomphunga ngokwenene!
ngubani namhlanje ohambelana kakhulu
Iindlebe ziya kuguqula i-Aquarius
Nge-Aquarius, indawo yendlebe inovakalelo kakhulu, nokuba oko kunokubonakala kungaqhelekanga kwabanye. Ewe, indlebe kunye ne-lobe zivusa ngakumbi iingcinga zabahlobo bethu base-Aquarius. Igama elinye leengcebiso: abanye bayayithanda le nto, abanye bayayicaphukela, kungoko iphindwe kabini okanye iyekile. Sukunyanzelisa kule nto ukuba i-Aquarius yakho iyakutyhalela kude!
Isinqe siyakukhulula iiPisces phezulu
Kunye intlanzi , amacala kunye nesinqe ziindawo ezibuthathaka, ngoko banike i-massage, ukuhlala kule mimandla ethile ukuvusa iingqondo zePisces. Unganqikazi ukuthatha umfazi wePisces esinqeni kwaye uphathe ngobunono inyonga yakhe.
Ziphi iindawo zakho ezinobungozi?
Cofa kumqondiso wakho IiAries ITaurus IGemini Umhlaza Leo Intombazana ILibra IScorpio Isagittarius Capricorn U-Aquarius intlanzi
I-17: 17 iyure yesipili: Iimpikiswano kufuneka zilindelwe
ngumhlaza uphawu lwamanzi
umgca wokuhamba ezintendeni zezandla zakho
luthini uphawu lwakho
ungayifumana njani inombolo yam yokubhula
Ngaba i-capricorn kunye ne-taurus ziyahambelana
intombi egqibeleleyo kuphawu ngalunye lweenkwenkwezi
Intsingiselo yebhayibhile inombolo 222